မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရောင်းရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - House Sale in 8Miles (ID-171)
Three stories, 2000 sqft area house for sale in 8Miles, Mayangone Township. House in Land area – 3000 sqft, Freehold land. House has Living-room, Four Master Bed-rooms, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furniture, Phone line,Water Heater and Sky-net line are already included.…...
Three stories, 2000 sqft area house for sale in 8Miles, Mayangone Township. House in Land area – 3000 sqft, Freehold land. House has Living-room, Four Master Bed-rooms, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furniture, Phone line,Water Heater and Sky-net line are already included.…
Listed 10 June 2019
Property ID: S-1200470
ရောင်းရန် - 2½ RC မေခအိမ်ရာ လုံးချင်းတိုက်သစ်
အိမ် 27' x 45'/ မြေ 30' x 52' 3MBR 2SBR 3AC ဂရမ်မြေ ရေချိုးခန်း/ အိမ်သာ သီးသန့်(၂)လုံး ပါကေးခင်း ...
အိမ် 27' x 45'/ မြေ 30' x 52' 3MBR 2SBR 3AC ဂရမ်မြေ ရေချိုးခန်း/ အိမ်သာ သီးသန့်(၂)လုံး ပါကေးခင်း
Listed5June 2019
Property ID: S-1200230
ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာလမ်းမတန်းလုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်
မြောက်ဥက္ကလာပ လမ်းမတန်း လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည် (40*60) ပေ 1RC ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး...
မြောက်ဥက္ကလာပ လမ်းမတန်း လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည် (40*60) ပေ 1RC ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး
Property ID: S-1200192
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း လုံးချင်းအိမ်အမြန်ရောင်းမည်။09977901503
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၄၃ရပ်ကွက် လုံးချင်းအိမ်အမြန် ရောင်းမည်။ (40*60)ပေ 1RC လေဝင်လေထွက်အထူး ကောင်းမွန်ပြီး ဂရန်…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၄၃ရပ်ကွက် လုံးချင်းအိမ်အမြန် ရောင်းမည်။ (40*60)ပေ 1RC လေဝင်လေထွက်အထူး ကောင်းမွန်ပြီး ဂရန်…
Property ID: S-1200191
ရောင်းရန် - ဒဂြုံမို့သစ်မြောက်ပိုင်း၃၅ရပ်ကွက်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။09977901503/09977901500
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၃၅ရပ်ကွက် လုံးချင်းအိမ်အမြန်ရောင်းမည်။ (40*60)ပေ 1RC 2MBR' 1BR' 3A/C တိုက်သစ် ပြင်ဆင်ပြီး ကျောင်းဈေးမှတ်ဆိုင်အနီး…...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၃၅ရပ်ကွက် လုံးချင်းအိမ်အမြန်ရောင်းမည်။ (40*60)ပေ 1RC 2MBR' 1BR' 3A/C တိုက်သစ် ပြင်ဆင်ပြီး ကျောင်းဈေးမှတ်ဆိုင်အနီး…
Property ID: S-1200190
ရောင်းရန် - Land for Sale (ID-79)
Land for sale in Yankin Township. Land area – 5000 sqft Asking price – 4500 Lakhs (Nego) Land for Sale (ID-79) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော…...
Land for sale in Yankin Township. Land area – 5000 sqft Asking price – 4500 Lakhs (Nego) Land for Sale (ID-79) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော…
Listed4June 2019
Property ID: S-1200175
ရောင်းရန် - ပဲခူးမြို့လည်ခေါင် သနပ်ပင်လမ်းမကြီးမေးတင် 40×95ပေ ရှိ…
ပဲခူးမြို့လည်ခေါင် သနပ်ပင်လမ်းမကြီးမေးတင် ပေ၄၀×၉၅ ရှိ ဘိုးဘွားပိုင်မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ် ၂ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်…...
ပဲခူးမြို့လည်ခေါင် သနပ်ပင်လမ်းမကြီးမေးတင် ပေ၄၀×၉၅ ရှိ ဘိုးဘွားပိုင်မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည် ကမ္ဘောဇဘဏ် ၂ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်…
Listed2June 2019
Advertiser : ကောင်းစင်သန့်
Property ID: S-1198170
Office no : 09773043664
ရောင်းရန် - မြောက်ဥက္ကလာပတိုက်ခန်းရောင်းမည်
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း တိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းမည်။09977901503
ရောင်းရန် - တောင်ကြီးမြို့နယ် အမှတ် (61)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ သွင်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊…
အပေါ်ထပ်မှ ရှုခင်းများ ကြည့်ရှု၍ ကောင်းခြင်း၊ လေကောင်းလေသန့်ရခြင်း စသည့်ကောင်းခြင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။...
အပေါ်ထပ်မှ ရှုခင်းများ ကြည့်ရှု၍ ကောင်းခြင်း၊ လေကောင်းလေသန့်ရခြင်း စသည့်ကောင်းခြင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
Ko Tin Zaw Htun
Advertiser : Ko Tin Zaw Htun
Property ID: S-1199793
Asking Price : 599 သိန်း
Office no : 09978587680
* Living Area - 4,036 sqft * No. of Bedroom -3Master Bedroom & Maid Room * Facilities -2Living Room, Kitchen Room, Balcony, Garden, Car Packing,3Storey Building * can buy YOMA Home Loan...
* Living Area - 4,036 sqft * No. of Bedroom -3Master Bedroom & Maid Room * Facilities -2Living Room, Kitchen Room, Balcony, Garden, Car Packing,3Storey Building * can buy YOMA Home Loan
Property ID: S-1199772
* Living Area for Land - 2,439 sqft * Living Area for House - 2,262 sqft * No. of Bedroom -3Single Bedroom * Facilities - Living Room, Kitchen, Bathroom & Toilet,2Storey Building * can buy YOMA Home Loan...
* Living Area for Land - 2,439 sqft * Living Area for House - 2,262 sqft * No. of Bedroom -3Single Bedroom * Facilities - Living Room, Kitchen, Bathroom & Toilet,2Storey Building * can buy YOMA Home Loan
Property ID: S-1199769
* Living Area for Land -3,600 sqft * Living Area for House - 3,360 sqft * No. of Bedroom - 1 Master Bedroom &3Bedroom * Facilities -2Living Room, Kitchen Room, Prayer Room, Car Packing,2Storey Building * can buy YOMA Home Loan...
* Living Area for Land -3,600 sqft * Living Area for House - 3,360 sqft * No. of Bedroom - 1 Master Bedroom &3Bedroom * Facilities -2Living Room, Kitchen Room, Prayer Room, Car Packing,2Storey Building * can buy YOMA Home Loan
Property ID: S-1199766
ရောင်းရန် - မှော်ဘီ ညောင်နှစ်ပင်ဇုံ
ရေမီး ပါရှိသည်။ အရှုပ်ရှင်းကင်းသည်။ 09977901502...
ရေမီး ပါရှိသည်။ အရှုပ်ရှင်းကင်းသည်။ 09977901502
Property ID: S-1199757
ရောင်းရန် - ဗဟန်း ဦးချစ်မောင်လမ်း
Asking Price : 970 သိန်း